Kumba - Hinds Feet Farm
ZVIRI KUBVUMA MA APPLICATIONS
KUNE WEDU WEZUVA ZUVA PROGRAM Nyorera Pano!
Yakatsaurirwa kushandira vanhu vanorarama nekukuvara kwehuropi.
Basa redu nderekuwedzera mukana wekukuvara kwepashure kwevanhu vanorarama nekukuvara kwehuropi nezvirongwa zvakabatanidzwa, zvakasiyana uye zvakazara; kubvumira nhengo dzedu kuita zvinhu zvine musoro uku dzichikudziridza pfungwa yokuva vanhu vari pamba uye munharaunda dzakapoteredza. Tichazadzisa basa iri neyakasiyana, yakatarisana nemunhu, mushure-kudzoreredza, zvirongwa zvakavakirwa munharaunda.
Tarisa uone yedu 2021 Year Report
Zuva uye Zvirongwa Zvekugara
Zuva reHinds' Feet Farm uye zvirongwa zvekugara ishanduko yeparadigm kubva kumaitiro ekurapa echinyakare kuvanhu vanorwara nekukuvara kwehuropi kuenda kumuenzaniso unobatanidza hutano hwakakwana uye hutano hwakanaka, huchipa nhengo simba kune basa uye zvinoreva muhupenyu mushure mekukuvara. Yakagadzirwa ne, uye ye, vanhu vanorarama nenhengo dzekukuvara kwehuropi vanotora chikamu muhurongwa hwese hwechirongwa.
Our Zvirongwa zveZuva dzakanangana nekubatsira nhengo yega yega kuwana yavo "nyowani yakajairika" kuburikidza neane simba pa-saiti uye nharaunda-yakavakirwa hurongwa hwakanangana nekuziva, kugadzira, manzwiro, muviri, magariro uye pre-mabasa emabasa. Mapurogiramu edu ezuva ari mune ese ari maviri Huntersville uye Asheville, North Carolina.
Nzvimbo yePuddin inzvimbo-ye-iyo-inoyevedza, 6-mibhedha yemhuri yekuchengeta imba yevakuru vane zvinoshungurudza kana kuwana kukuvara kwehuropi. Imba iyi yakagadzirirwa uye ine vashandi kuti vabate zvinonetsa zvinodikanwa zvevanhu vanoda pakati nepakati kusvika kune yakanyanya rubatsiro nemabasa avo ekurarama kwemazuva ese (ADLs). Nzvimbo yePuddin iri pane yedu Huntersville kambasi.
Hart Cottage Imba yekugara ine mibhedha mitatu inotsigirwa yakagadzirirwa kuzadzisa zvinodiwa nevakuru vane kukuvara kwehuropi avo vakazvimiririra nemabasa ese ekurarama kwemazuva ese (ADLs), asi vachida rubatsiro rwakapfava kusvika pakati nepakati uye kutarisirwa kuti vaite mabasa uye varambe vakachengeteka. Hart Cottage iri pane yedu Huntersville kambasi.
Nhengo dzechirongwa chekugara dzinokurudzirwa kuita, kudyidzana uye kutora chikamu mune zviri kuitika zvezvirongwa zvezuva zvakare.
Rubatsiro Rwenyu Runodiwa
Chipo chimwe chete chinoita mutsauko mukuru.
Rutsigiro rwako rwepamwedzi ruchatibatsira kuenderera mberi nekupa zvirongwa zvakasarudzika uye zvitsva zvevakuru vane kukuvara kwehuropi nemhuri dzavo
Dzvanya HERE kuti udzidze kutsigira Hinds 'Tsoka Farm!
"Pandakatanga kukuvara kwangu, ndakasvetuka ndichienda kunzvimbo dzakasiyana dze rehab. Ndakapengerwa nenyika uye ndaida kuenda kumba. Pakupedzisira, unofanira kubvuma kukuvara kwako uye matambudziko. Ndakadzidza kushivirira nevanhu vakandipoteredza uye ini."
"Ini handisi kukwanisa kuita zvinhu zvandaimboita, asi ndiri kutsvaga nzira itsva nepekugara kuti ndikwanise kuita zvinhu izvozvo."
"Ndakaita shamwari dzakawanda paFarm. Vamwe vatori vechikamu vose vane ushamwari, uye ndinofarira kuva navo.. Ndinodawo kushamwaridzana nevashandi. Tinonakidzwa zvikuru pamwe chete."
"Ini handigoni kuita izvi ndoga, asi ini ndoga ndinogona kuita izvi. Uye, kuva pakati pevanhu vakaita seni kwandidzidzisa kushivirira kuzarura maziso angu uye kuona vamwe mune chimwe chiedza."
"Chirongwa chezuva chakabatsira zvikuru muupenyu hwangu. Vakandipa rusununguko rwakakwana rwekuita nekudzidza kubva pane zvandakakanganisa."
"Maitiro ako ehunhu ekuvaka ruremekedzo, kuvimbana uye kuremekedzana pakati penhengo, vashandi nevabereki inopenya kuburikidza pese patinoshanya."
"Akakura zvakanyanya mumakore ano apfuura nenzira dzakawanda. Ane nharaunda kuHinds Feet Farm yeshamwari uye zviitiko zvinomubatsira kubudirira, kukura uye kuva nehupenyu hunofadza."
Nhau uye Ruzivo
Dai 1, 2022